Ereyada dhaadheer ee dheeraadka ah - u taagan ereyo gaar ah ama isku dhafan erayada muhiimka ah ee alaabooyinka dukaamadu ay u badan tahay in ay qaataan su'aalaha raadinta alaabta ee Amazon. Si fudud u dhig, ereyada muhiimka ah ee Amazon waa ereyada muhiimka ah ee loogu talagalay raadinta alaabta inta badan. Xaqiiqdii, gaar ahaan nooca ereyada muhiimka ah waxay ka kooban tahay qiyaastii 70% baaritaanada alaabooyinka ay sameeyaan dukaamada nool ee halkaa ka jira.
Taasina waa sababta ay muhiim u tahay in la aqoonsado xaqiiqada raadinta ee dheeraadka ah ee ku haboon ee alaabtaada ku saabsan iibinta ama qaybaha wax soo saarka. Habkaas, waxaad heli doontaa fursado wanaagsan oo lagu muujiyo dhagaystayaasha ballaaran ee dadka iibsadaha ah ee raadinaya alaabta lagu soo bandhigay iibinta halkaas. Kuwa kale, waxaan ku talinaynaa isticmaalka qalabka cilmi baarista ee soo socda, gaar ahaan habka loo yaqaan 'ecommerce platform'.